Sida loo soo celiya Barzakh tirtiray iyo Soo Celinta tirtiray Data Waxaa ku
> Resource > Ladnaansho > Sidee soo celinta Barzakh tirtiray iyo Soo Celinta tirtiray Data Waa in
Sida loo soo celiyo xijaab tirtiray?
"Waxaan ku rakiban Windows XP on baabuur cusub adag shalay. Waxaa jira 2 drives adag dibadda ku xiran in aan PC.I Waxaa lagu Yidhi Gal drive si ay u soo dajiyo inta ay socoto. Laakiin waxaan si qalad ah la tirtiro Risaalo ka mid ah drive in. My laptop karo hadda garwaaqsadeen aan HDD dibadda, balse aanan awoodin in aan u furo. I karaa celin xijaab tirtiray iyo xogta aan ? "
Jawaabtu waa HAA. Markaas sababta aan u soo celin karaan xijaab tirtiray iyo xogta aan?
Waxay ku xiran tahay qaybta miiska xijaab iyo boot in haddii ay ogaadaan nidaamka karaan xijaab ama aan. Haddii qaybta boot xijaab waa la tirtiray ama waxyeeleeyeen virus, Risaalo ka noqon doono aan la arki karin, in si kale loo dhigo, waxaad u malaynaysaa in aad ku tirtiray Risaalo ka badiyay xogta ku hadlo xijaab in la tirtiro.
Laakiin dhab ahaantii, xogta jira, oo ay geli karin oo kaliya in aanad ka heli kartaa iyaga oo ku My Computer yihiin. Barzakh module-kabashada Wondershare Data Recovery ah u qeexi kara disk oo dhan adag oo lagu ogaan Risaalo ka tirtiray, in ka dib markii aad kara celin xijaab tirtiray iyo dib aad files muhiim ah.
Waa ammaan in la isticmaalo u soo kabsaday kaliya qoruhu aad dhex kabsado miiska xijaab ama boot qaybta, taas oo macnaheedu yahay software marnaba isku dayi doonta in ay qoraan xogta ku saabsan Risaalo oo aad rabto in aad soo celiyo. Ka sokow, version maxkamadda idin tusin Risaalo ka lumay / tirtiray, oo version buuxa kuu ogolaanaysaa inaad soo celin.
Halkan aynu qaadan version Windows sida tusaale. Daahfurka Wondershare Data Recovery , dooro Standard Mode, u tag ah Barzakh, Recovery on interface ugu weyn. Recovery Barzakh Tani dib u heli kartaa in aad maqaal qoruhu laga badiyay, tirtiray ama dhaawac, iyo sidoo kale macluumaadka ku kaydsan ku yaal.
Dooro drive jirka meesha aad badiyay qoruhu aad. Markaas riix "Next" in baarista qoruhu lumay.
Marka iskaanka u dhameystiray, oo dhan maqaal qoruhu disk lumay ee lagu soo bandhigi doonaa, oo hadda kaliya aad u baahan tahay in ay doortaan mid ka mid ah in aad doonaysid in aad ka bogsanayaan oo ay ku dhufteen "Start".
Hadda waxaad halkan waa inuu ka soo kabsado xogta laga badiyay Risaalo. Haddii Risaalo waa weyn yahay, waa in aad waqti dheer u iskaanka qaadan doonaa. Scan ka dib, dhammaan natiijooyinka si toos ah u abaabulan doonaa noocyada file. Waxaad iyaga oo dhan hubi kartaa dib u soo kabashada, ama aad u heshid dib eegista.
Ka hor inta sameeyo dib u soo kabashada, waxaad ku eegaan kartaa sawiro, Words, PDF, PPT, ZIP files, iwm si loo hubiyo tayada iyo xaqiijiso inaad iyaga soo celiyo ama ma u baahan tahay. Marka aad soo kabsaday, fadlan badbaadiyo, waa ku saxan kale, haddii aad overwrite disk ah. Haddii aadan heli dib faylasha aad rabto, aad isku dayi kartaa in siyaabo kale. Laakiin haddii aad overwrite aad disk, files la permenantly tirtirayaa.
Sidee inuu ka soo kabsado Photos ka Memory Card SanDisk ah
Video Recovery Mac: Sidee inuu ka soo kabsado tirtiray Video ku Mac